ရေ အထောက်အထား စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > multi အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ရေ အထောက်အထား စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
ရေ အထောက်အထား စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator
AOX-M စီးရီး ရေ အထောက်အထား စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးချ တွင် ရေနံ, ဓာတု, ရေ ကုသမှု, shippတွင်g, စက္ကူ mတစ်ဦးkတွင်g, စွမ်းအား အပင်များ, heတစ်ဦးtတွင်g, buildတွင်g အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု နှင့် အခြား တွင်dustries.AOX ရှိပါတယ် ဖူး ကတိသစ္စာပြု သို့ အဆိုပါ ပုံစံ နှင့် ပြုလုပ် ၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော ရေ အထောက်အထား စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် ထိန်းချုပ်မှု equipment.It ဖြစ် thဖြစ် အောင်မြင်သော positionတွင်g နှင့် အားကြီးသော ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေး အသိအမြင် ၏ အားလုံး ဖြစ်စဉ် ဝန်ထမ်းများ ထို ကြောင့် AOX တစ်ဦး ကုန်သွင်းသူ ၏ vတစ်ဦးlve အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု ဖြေရှင်းချက်။
AOX-M စီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့်, သံလိုက်သော induction အကြွင်းမဲ့အာဏာအန်ကုဒ် actuatorusing ရိုးရာ potentiometer, တိုးတက်လာသောတည်နေရာတိကျမှန်ကန်မှုကိုဖျက်သိမ်းရေးနှင့်အခါ actuator ပါဝါပြတ်တောက်ဘက်ထရီတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောအဆို့ရှင်အနေအထားရှိနိုင်ပါသည်မလိုအပ်ပါဘူး။
AOX-M စီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့်တွင် / ချွတ်နှင့်အသိဉာဏ် Module ထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ် fieldbus interface ကိုရိုးရှင်းကနေအမျိုးမျိုးသောထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်ခြင်းကို actuatorcan ။
AOX-M စီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ဥရောပ, အမေရိကတိုက်, ICAO, သြစတြေးလျ, အာဖရိက, အာရှ, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအပါအဝင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ဝတ်ပြုကြလော့။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်ရေကုသမှု, အပူ, ရေနံ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, အစားအစာ, ဆေးဝါး, အထည်အလိပ်, စက္ကူချမှတ်ခြင်း, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, ရောစပ်အသစ်စွမ်းအင်နှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အသုံးပြုသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားအများအပြား Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 companies.If နှင့်အတူအလွန်ဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားပြီး, E-mail ကို [email protected] ဖြင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစားအပေါ်ထားရှိတန်ဖိုးနှင့်အတူ, AOX ၏ R & D အဖွဲ့သည်လုံးဝ 96 အမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရရှိထားခဲ့ပါသည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်း၏ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့။ ကျနော်တို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့ဆက်လက်မြင့်မားဆုံးအရည်အသွေးမြင့်စံချိန်စံညွှန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား AOX-M စီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
မေး: သင် AOX-M စီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator များအတွက် manufactory သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီပါသလား?
ဖြေကျနော်တို့ Ruian, Zhejiang ပြည်နယ်, တရုတ်, အနှစ် 20 ကျော်အဘို့အ actuator အတွက်အထူးပြုသည့် manufactory ဖြစ်ကြသည်။
မေး: သင်ငါ့ကို theAOX-M စီးရီးရေအထောက်အထားမော်တော်ပေါင်းစုံအလှည့် actuator အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ပါသလား?
hot Tags:: ရေ အထောက်အထား စက်တပ် ပေါင်းစုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်